အနုပညာနှင့်ဖျော်ဖြေရေး | လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက် - အပိုင်း 2
A. S. Griboedov မှ“ Wit from Wit” မှစိတ်၏ပြနာများ
အပေါ် Posted 15.09.2019 18.11.2019
“ Woe from Wit” မှစိတ်၏ပြproblemsနာများသည်ပထမဆုံးအနေဖြင့်နာမတော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြသည်။ ဒီဟာသကိုရေးတုန်းက Griboedov ဟာစိတ်ရင်းကောင်းပြီးအသိဉာဏ်ရှိသူ၊ သူ့မိခင်ဘက်လိုက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားကိုပြသဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။
ရုရှားတွင် 17 ရာစုအတွင်းပန်းချီတိုင်းပြည်၏သမိုင်းအဘို့ဤမျှလောက်အရေးပါသည်အဘယ်ကြောင့်
၁၇ ရာစုသည်ရုရှားနိုင်ငံ၏ပဒေသရာဇ်ခေတ်၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင်ပဒေသရာဇ် - serf စနစ်အားပိုမိုခိုင်မာလာစေပြီးစနစ်တစ်မျိုးတည်းရှိအူသိမ်အူမထဲတွင်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ဓနရှင်ဓနအင်အားစုများကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ မြို့ကြီးများနှင့်ပြည်သူလူထု၏လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ...
Self- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဘာဖတ်ရမည်ကိုမသိပါသလော။ ဒီမှာအရိပ်အမြွက်တစ်ခုပါ
လူတစ် ဦး ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ရှည်လျားပြီးရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ခက်ခဲသောအဆင့်ဆင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွင်သိမြင်မှုနှင့်အလိုတော်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ၊ ယုံကြည်မှုများနှင့်စံနမူနာများ၊ ခံစားချက်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။ မင်းလုပ်နိုင်တယ် ...
အချစ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်။ စာပေအတွက် Romantic ၏လက္ခဏာများ
စာပေတွင်အတွေ့အကြုံမရှိသောသူတစ် ဦး သည်ဤခေတ်ကိုဆွေးနွေးခြင်းသည်၎င်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုလျော့နည်းစေပြီး၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်မှားကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ဒီ၏ဗေဒသောယူဆချက် ...
The Golden Pot” ဇာတ်လမ်းပုံပြင် - ဟော့ဖ်မန်း - အကျဉ်းချုပ်၊ ကြံစည်မှု၊ သူရဲကောင်းများ
နိုင်ငံတိုင်းမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်တွေရှိတယ်။ ၎င်းတို့တွင်စိတ်ကူးယဉ်သည်စစ်မှန်သောသမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည်ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်ကွဲပြားသောနိုင်ငံများ၏နေ့စဉ်အသွင်အပြင်များစွယ်စုံကျမ်းဖြစ်သည်။ ရိုးရာပုံပြင်များတည်ရှိသည်။
ပုံဖော်နေသော "ကြေးဝါမြင်းစီးသူရဲ" အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ပေါ်တွင်? အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ၏သမိုင်း
အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများသည်သမိုင်းဝင်အတိတ်ကိုဂုဏ်ပြုရန်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနှင့်အံ့မခန်းဖွယ်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အနုပညာ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်သမိုင်းကိုအထင်ကြီးလေးစားသူများသည်သူတို့ကိုလေးစားကြသည်။ အဲဒီမှာနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောအမည်ရှိသည့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များရှိသော်လည်းလူအများစုကမူ ...
Captain Grant ကိုရှာဖွေခြင်း
"In Search of Captain Grant" ရုပ်ရှင်တွင်ဆိုဗီယက်ရုပ်ရှင်ရုံ၏သရုပ်ဆောင်များသည်တစ်ချိန်က Jules Verne ရေးသားခဲ့သောဇာတ်လမ်းကိုပရိသတ်အားပြောကြားခဲ့သည်။ ဖခင်ကိုကယ်တင်ဖို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ခရီးကိုသွားခဲ့တဲ့ကလေးတွေအကြောင်းပါ။ ဒါရိုက်တာ ...
ဂျူလီယာရတ်ဘာ့ဂ်: ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ (ဓာတ်ပုံ)
ဂျူလီယာရတ်ဘာ့ဂ်သည်ရုရှားသာမကသာမကဆိုဗီယက်ကျောင်းမှမင်းသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကုန်လွန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝမ်းနည်းဖွယ်အတွေးများမှအာရုံလွဲသွားလျှင်ခေတ်သစ်အနုပညာရှင်တစ် ဦး အတွက်ဤသည်မှာအကောင်းဆုံးထောက်ခံချက်ဖြစ်သည် အလွန်များစွာသော၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပြီးနောက်
Plasma Group - အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ဗီဒီယိုနှင့်သီချင်းများ
ရုရှားတွင်ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသောဂီတကိုဖျော်ဖြေသောရုရှားစကားပြောပရိသတ်တွင် Plasma အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားလေးများ၏ပရိသတ်များကပင်၎င်းတို့ကိုမူလ Slow Motion ဟုခေါ်သည်ကိုသိကြသည်။
အမေရိကန်ရုပ်ရှင် "Anna Karenina": သရုပ်ဆောင်၊
ဒါရိုက်တာများစွာကိုရုရှားဂန္ထဝင် Leo Tolstoy "Anna Karenina" ၏လက်ရာကဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်၊ ရုရှားနှင့်အမေရိကန်သရုပ်ဆောင်များသည်ဒါရိုက်တာများကသူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုအမြင်ကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားသည့်ရုပ်ရှင်များတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဝတ္ထု၏ကြံစည်မှုကိုအခြေခံသည် ...
Brienne Tarte: မင်းသမီး။ သူမဘယ်လောက်ရှည်သလဲ
တိုင်းပြည်ခုနစ်ခုတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဘဝများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုစွဲမက်သောကမ္ဘာကြီးတစ်ခုသည်၎င်း၏နေထိုင်သူများကိုတစ်ချက်လျှင်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ စိတ်မကောင်းခြင်းများရှိသော်လည်းစီးရီး၏ပရိသတ်များအကြားမြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းသားတို့ကိုလစျြလြူရှုမှုမရှိပါ။ တစ်ခု ...
Svetlana Lazareva ၏ကြယ်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Svetlana Lazareva ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိသည်အဆိုတော်၏ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ပြီးငယ်ငယ်ကတည်းကစင်မြင့်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအရာအားလုံးတွင်ပထမဆုံးဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ဘဝမှတဆင့်မိန်းကလေးနှင့်အတူထင်ရှားသောအလင်းရောင်သည်ကောင်းကင်မှလာသည်။ ဖန်တီးမှု ...
Dead Souls: ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ "Dead Souls" နီကိုလိုင် Vasilyevich Gogol
N. V. Gogol ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်ကောင်းများမှာ Dead Souls ဖြစ်သည်။ နီကိုလိုင်းဗစ်စလီဗစ်၏တစ်ခေတ်တည်းသားများ၏သုံးသပ်ချက်များကိုသူနှင့်အနီးကပ်သိကျွမ်းခဲ့သူများကစာရေးသူသည်မထွက်ခွာကြောင်းဖော်ပြသည်
ပြဇာတ်ရုံ။ Lensovet: repertoire, သရုပ်ဆောင်တွေ, လိပ်စာ
ပြီးနောက်အမည်ရှိပြဇာတ်ရုံ Lensoviet သည် 20 ရာစု၏ပထမတစ်ဝက် မှစ၍ တည်ရှိခဲ့သည်။ သူ၏တော်လှန်ရေးခရီးစဉ်သည်အသက်အရွယ်မရွေးပရိသတ်အမျိုးမျိုးအတွက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများပါဝင်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့တွင်ထူးချွန်အနုပညာရှင်များစွာရှိသည်။ ဇာတ်လမ်း ...
Bayan Yesentaeva - မင်းသမီးအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဒီနေ့ဘေယာအီစင်တာဗာကဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းတို့ငါတို့ပြောပြမယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမင်းသမီးနှင့်သူမ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ၏ဓာတ်ပုံ။ သူမသည်ကာဇက်စတန်ရှိဇန်နဝါရီလ 1974 တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမသည်မင်းသမီးသာမကဘဲ ...
Olesya Zheleznyak အတ္ထုပ္ပတ္တိ။ မင်းသမီး၏ဖန်တီးမှုနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ
Olesya Zheleznyak ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိသည်သူမ၏ပရိသတ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်သည်။ သူမဘယ်မှာမွေးဖွားလာတယ်၊ ဘယ်မှာကြီးပြင်းလာသလဲ၊ ရုပ်ရှင်ကြီးထဲဘယ်လိုဝင်လာတာလဲမင်းသိလား။ ထို့နောက်ဆောင်းပါးကိုစလေ့လာရန်အဆိုတင်သွင်းသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အာကာသယာဉ်မှူးများသည်သာယာလှပသောကြယ်ပွင့်အပေါက်တစ်ခုမှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်“ အသက်ရှင်” ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ၎င်းမှာကြယ်ပွင့်အာကာသ၏မှောင်မိုက်နေသောအကန့်အသတ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အပြာရောင်ကမ္ဘာမြေသည်ယိမ်းယိုင်နေသည်။ သို့သော်သာမန်လူများသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ရုပ်ပုံများနှင့်သာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်။
စီးရီး "Naughty Kiss" ("Playful Kiss") - သရုပ်ဆောင်နှင့်သရုပ်ဆောင်၊ အစီအစဉ်
ကျောင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သောစီးရီးများသည်အမြဲတမ်းအလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ "မကောင်းသောအနမ်း" - ဒါကအတိအကျ ...
"နောက်ဆုံးညစာ" Leonardo da Vinci - ကျော်ကြားသောနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများဘယ်မှာလဲ
အကယ်၍ သင်သည်မရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်များကိုကူးယူခဲ့သောပန်းချီလက်ရာများကိုပြန်လည်အမှတ်ရရန်ကြိုးစားလျှင် Leonardo da Vinci ၏နောက်ဆုံးညစာစားပွဲသည်ဤစီးရီးတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ နှစ်နှစ်ရေးသားခဲ့သည် ...
တေးဂီတတွင်အကန့်သည် ... edging "ဂီတဝေါဟာရကို"
ဂီတတွင် kant သည်နေ့စဉ် polyphonic သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရုရှား၊ ဘီလာရုစ်နှင့်ယူကရိန်းတို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲ။ ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးအစားအဘယ်မှလာသနည်း ...
ယခင်စာမျက်နှာ စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ3... စာမျက်နှာ 165 Next ကို 's Page
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,831 စက္ကန့်ကျော် Generate ။